Uthotho lweApple 7: inkulu, yomelele, iyafana | IPhone iindaba
I-Apple Watch Series 7: inkulu, inzima, iyafana
ULuis Padilla | 18/10/2021 11:53 | Ukuhlaziywa ukuba 18/10/2021 11:55 | Apple Watch, Ezahlukeneyo
Sivavanye iApple Watch Series 7, ngakumbi Imodeli yentsimbi ngombala wegraphite ngonxibelelwano lweLTE. Isikrini esikhulu ngakumbi kunye nokulayisha ngokukhawuleza… ngaba kufanelekile ukuba utshintshwe? Kuxhomekeka kwinto onayo esihlahleni sakho.
Amarhe malunga neApple Watch yekamva aqala ukusuka kumzuzu wokuphehlelelwa kwemodeli entsha, kwaye unyaka kukho ixesha lokukhohlisa okuninzi okuphela kuguquka kube kukuphoxeka. Kulo nyaka silindele utshintsho kuyilo, kubandakanya iisenzi ezintsha zokulinganisa ubushushu kunye namanqanaba eglucose egazini, noxinzelelo lwegazi lwaluza kulawulwa yiApple Watch. Kodwa inyani kukuba iApple Watch ifikelele kwinqanaba eliphezulu lokukhula kangangokuba utshintsho sele luza ne-dropper, kwaye lo nyaka uyakuqinisekisa.
1 Ubungakanani obutsha, uyilo olufanayo
2 Ukuxhathisa ngakumbi
3 Intlawulo ekhawulezileyo
4 Imibala emitsha kodwa imibala engekhoyo
5 Eminye ayitshintshi
6 Isikrini siyayicacisa yonke into
Ubungakanani obutsha, uyilo olufanayo
Eyona nto intsha inomdla kwi-Apple Watch entsha bubungakanani bayo obukhulu kuzo zombini iimodeli. Ngonyuko oluncinci kubungakanani obupheleleyo, iApple ikwazile ukwandisa ubungakanani beemodeli kuzo zombini iimodeli, ukunciphisa ii-bezels ukuya kwindawo apho iziboniso zinabela khona kumda weglasi egobile, ethi iqapheleka ngakumbi xa sibona iifoto zescreen esigcwele okanye sisebenzisa amabala amatsha, Ikhethekileyo kuthotho 7. Iscreen sifike kwi-20% sikhulu kune-6, kwaye nangona ekuqaleni bekubonakala ngathi utshintsho luzakuphantse lubekho, kubomi bokwenyani kubonakala ngathi bukhulu ngakumbi.
Sebenzisa iiapps ezinje ngeCalculator, Ukucofa kweContour kunye neModyuli yeDuo (ekhethekileyo), okanye kwibhodi yezitshixo epheleleyo (ikwodwa) iphakamisa obu bukhulu besikrini. Ibonisa okuninzi ... nangona kungekho sizathu sokuba zingafumaneki kwiimodeli zangaphambili, kuba ukuba uthotho 7 lwe-41mm lunokuba nazo, i-Series 6 ye-44mm nayo. Kulihlazo ezi ntlobo zezigqibo, kuba iApple Watch eneminyaka eli-6 ubudala (i-Series XNUMX) sele iphelelwe yisoftware entsha, kwaye ayenzi zixhobo zixhobo.
Ukongeza kubungakanani bayo kwakhona, isikrini siqaqambile (ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70) xa singasebenzi, okoko nje une "Screen ehlala ikho" kusebenze ukhetho. Ukuba awuzange uzame olu khetho kwi-Apple Watch, ngokuqinisekileyo awuyi kulixabisa, kodwa nje ukuba unayo uyaqonda ukuba iyasebenza ngokumangalisayo Kuba ikuvumela ukuba ujonge ixesha ngelixa ubhala inqaku elinje, ngaphandle kokuphakamisa isandla sakho kwikhibhodi kwaye ucofe isihlahla sakho. Olu tshintsho ekukhanyeni luphucula oku kusebenza kwaye lwenza njalo (kwithiyori) ngaphandle kokuchaphazela ukuzimela kwewotshi, kumnandi kakhulu.
Siyaqhubeka nokuthetha ngescreen sewotshi, lelinye lawona malungu ayo abuthathaka. I-Apple iqinisekisa ukuba iglasi engaphambili yeApple Watch iyamelana nezothuso, enkosi kuyilo olutsha olunesiseko seflethi, ukongeza ekuqinisekiseni iwotshi njenge-IP6X enganyangekiyo ngothuli, eyinika ukhuseleko olupheleleyo. I-Apple ayikaze iqinisekise iwotshi yayo ngokuchasene nothuli, ke asazi mahluko xa kuthelekiswa nezizukulwana zangaphambili. Malunga nokumelana namanzi, sisenobunzulu beemitha ezingama-50, akukabikho zinguqu kulo mba.
I-Apple Watch iseneefestile ezahlukeneyo zangaphambili ngokuxhomekeke ekubeni ziyimodeli yezemidlalo okanye imodeli yentsimbi. Kwimeko yemodeli yezemidlalo, ineglasi ye-IonX enganyangekiyo kukothuka, enganyangekiyo kwimikrwelo, Ngelixa imodeli yentsimbi ikristale yenziwe ngeSafire, enganyangekiyo ngokukrwela, kodwa ayinyangeki kwaphela kukothuka. Kumava am, ndiyixhalabele kakhulu imikrwelo eglasini kunamaqhuqhuva, kwaye sesona sizathu sokuba kutheni ndikhethe imodeli yentsimbi kwakhona emva konyaka kunye neAluminiyam Series 6.
Ukutshaja ngokukhawuleza yenye yezinto ebekujongwe kuzo kukuphuculwa kwale Apple Watch Series 7. Singathanda ngakumbi ukwandisa ukuzimela de sibe nokufikelela kwiintsuku ezimbini ngaphandle kokuzihlaziya, kodwa kufuneka sizilungiselele. Kuthatha ixesha elincinci ukwenza kwakhona. Into ingcono kunento. Oku kuyakwenza lula ukuba sikwazi ukuyinxiba ebusuku ukujonga ukulala kwethu kwaye kusasa kusebenza njengewotshi yealam.. Ngokuka-Apple, sinokuphinda sihlaziye i-Series 7 ukuya kuthi ga kwi-30% ngokukhawuleza kunoluhlu lwe-6, ukusuka kwi-zero ukuya kwi-80% kwimizuzu engama-45, kunye nemizuzu esi-8 yokutshaja (ngelixa sihlamba amazinyo) sinike ubusuku bonke bokujonga ubuthongo.
Ukusukela oko iApple yaphehlelela lo msebenzi mtsha wokulala kwiApple Watch yethu, bendiqhele ukuyihlaziya kabini ngemini: xa ndifika ekhaya ebusuku ngelixa ndilungiselela isidlo sangokuhlwa ndide ndilale, kusasa xa ndihlambayo. Ngale ntlawulo intsha ikhawulezayo ndiya kuba nakho ukubeka iwotshi esihlahleni sam kwangoko ebusuku, ngaphandle kokulinda ukuya kulala ... ukuba nje ndiyakhumbula, eya kwenzeka kunqabile. Mhlawumbi ngokuhamba kwexesha oku kuhlawuliswa ngokukhawuleza kuya kungqineka kuluncedo olukhulu, kodwa okwangoku andicingi ukuba lolona tshintsho lukhulu kwimikhwa yesininzi.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa ukutshaja ngokukhawuleza, kufuneka usebenzise itshaja entsha kunye nesinxibelelanisi se-USB-C esifakwe kwibhokisi ye-Apple Watch, kunye itshaja ekufuneka inegunya lokutshaja le-18W okanye ihambelane nokuHanjiswa kwaMandla kwimeko apho i-5W iya kwanela. Ishaja esemgangathweni ye-20W ye-Apple ilungele oku, okanye nayiphi na enye itshaja evela kumenzi onokuthenjwa esinokuyifumana kwiAmazon ngexabiso eliphantsi (Ndiyayithanda lento). Ngendlela, isiseko se-Apple seMagSafe esixabisa i-149 ye- € ayihambelani nokutshaja okukhawulezayo, inkcukacha ezibalaseleyo.
Imibala emitsha kodwa imibala engekhoyo
Kulo nyaka i-Apple ithathe isigqibo sokutshintsha umbala we-Apple Watch yayo ngendlela enkulu, kwaye yenze njalo ngesigqibo esingathandwanga ngumntu wonke. Kwimeko yeAluminiyam Apple Watch Sport, Asisenayo isilivere okanye indawo engwevu, kuba iApple yongeze inkwenkwezi emhlophe (emhlophe-igolide) kunye ezinzulwini zobusuku (eblowu-mnyama) ukuyitshintsha. Igcina umbala obomvu nohlaza okwesibhakabhaka, kwaye ikongeza isitayile somkhosi oluhlaza esimnyama esithandwa kakhulu. Ukuba bendikhethe i-aluminium kulo nyaka ndicinga ukuba ngendihleli ezinzulwini zobusuku, kodwa akukho namnye wale mibala undeyisayo.
Mhlawumbi loo nto indenze ndaya kwimodeli yentsimbi, ebisele iyikhathaza intloko yam kwangaphambi kokuba ndiyazi imibala yokugqibela. Ngensimbi iyafumaneka ngesilivere, igolide kunye negraphite (kuba isithuba esimnyama silinganiselwe kuHermes edition ngaphandle kokufikelela kuninzi). Isinyithi sihlala sivelisa isikrokro esikhulu kwabo bacinga ngaso ngenxa yendlela esiya kumelana ngayo nokuhamba kwexesha, kodwa ibambelela kakhulu kune-aluminium. Kwaye ndiyitsho le nto emva kokuba ndineeApple ezimbini ezibukele ngentsimbi kunye nezimbini kwialuminium.
Okokugqibela, sinokukhetha i-Apple Watch kwi-titanium, enendawo emnyama kunye nombala we-titanium ongandiqinisekisiyo, yiyo loo nto ndikhethe intsimbi, ekwabiza kakhulu.
Akukho lutshintsho kwi-Apple Watch entsha. Ubungakanani besikrini esikhudlwana kunye nokuqaqamba kokungasebenzi, ukuxhathisa ngakumbi kwiglasi engaphambili kunye nentlawulo ekhawulezayo endingayiboniyo ukuyisebenzisa okwangoku. Khange sithethe nangamandla amakhulu okanye isantya xa usenza imisebenzi, kuba ayikho. Iprosesa ebandakanya olu luhlu lutsha 7 iphantse yafana noluhlu lwe-6, ethi kwelinye icala isebenze kakuhle nakwinkqubo yokusebenza yamva nje, iwotsOS 8, kodwa iyafana. Abanye bethu babelindele inyathelo elincinci lokuzimela geqe kwi-iPhone, kodwa hayi.
Akukho lutshintsho lwenzwa, akukho zempilo, akukho liso lokulala, kwaye akukho zixhobo zintsha ngokwenene, njengoko kungekho. Ukuba sibeka bucala kwiidayal ezintsha, akukho nto ikhethekileyo ye-Series 7, kodwa hayi kuba ibandakanyiwe kwezinye, kodwa ngenxa yokuba akukho nto intsha. I-Apple Watch iyimveliso ejikeleze kakhulu, zombini kuyilo kunye nemisebenzi yayo yokujonga impilo kunye nemidlalo. Ukulinganiswa kwenqanaba lentliziyo, ukubonwa kwesingqisho esingaqhelekanga, imilinganiselo ye-oxygen saturation, kunye ne-EKG ithathe ibha ephezulu, iphakame kangangokuba neApple khange ikwazi ukuyibetha kulo nyaka, ihleli apho yayikhona. Ungayithenga nge- € 429 (ialuminium) kwiApple nakwiAmazon (unxibelelwano)
Isikrini siyayicacisa yonke into
I-Apple isungule i-smartwatch entsha apho babheje khona yonke into kwiscreen esihle, esihle nesikhanyayo. Kuyamangalisa ngokwenene nje ukuba uyikhuphe ebhokisini kwaye uvule umlindo okokuqala. Utshintsho kubukhulu kunye nokwanda kwendawo yesikrini phantse ukuya emaphethelweni kuyenza ijongeke njengewotshi enkulu kakhulu kunangaphambili, nangona kungakhange kwandiswe ubungakanani. Kodwa yiyo loo nto, akukho nto intsha inokuthethwa ngale ngqungquthela 7, ubuncinci akukho nto intsha ifanelekileyo.
I-Apple Watch yeyona smartwatch ibalaseleyo kwintengiso, kude nakowesibini, kwaye nekhefu lalo nyaka alizukuwenza lo mgama ube mfutshane. Isigqibo sokuthenga iApple Watch Series 7 kufuneka sithathwe ngokujonga le nto uyinxibileyo ngoku esihlahleni. Ngaba iya kuba yi-Apple Watch yakho yokuqala? Ke ufumana eyona smartwatch ilungileyo onokuyithenga ngoku. Sele unayo iApple Watch? Ukuba uthathe isigqibo sokutshintsha, qhubeka. Kodwa Ukuba ubuthandabuza, olu luhlu lutsha 7 aluzukunika izizathu ezininzi zokuzicima.
Ithunyelwe nge: 18 Oktobha ka-2021
Utshintsho lokugqibela: 18 Oktobha ka-2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple Watch Series 7: inkulu, inzima, iyafana
Imizuzu esi-8 yokuhlamba amazinyo…. Ndenza into engalunganga X)
Iivenkile ezikwi-Intanethi zivaliwe! Umnyhadala weMac ukufuphi
I-Apple iyaqhubeka nokurhoxisa ii -apps ngesicelo sikarhulumente wase-China